Umkhulu kaGreta Thunberg ube ngumsunguli womphumela wokushisa komhlaba kanye nokuncishiswa kwenani labantu ngama-eugenics: UMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-18 November 2019	• 8 Amazwana
Uma othile ngokuzumayo ethola ukunakwa okungaka futhi eyinkanyezi ekhuphukayo esiteji somhlaba, lokho akuvami ukwenzeka ngengozi. Futhi esimweni sesimo sezulu saseSweden kanye nesishoshovu sezemvelo uGreta Thunberg kubonakala sengathi ukuhlela okufanelekile kwakudlule lokhu. Unina, uMalena Ernman, wawina owokugcina ukubamba iqhaza kwabaseSweden kwi-Eurovision Song Contest e-2009 futhi ngenxa yalokho waba ubuso obujwayelekile, obusebenzayo uma indodakazi yakho ibukeka njengawe futhi kamuva iba inkanyezi yomhlaba. Ukuphakanyiswa okuyimfihlo kungenzeka sekuqalile lapho. Ungaphendula umbuzo ukuthi ngabe umama uMalena angacula kahle yini (bheka lapha). Kodwa-ke, kujabulisa kakhulu ukutadisha umndeni waseThunberg futhi uzothola ukuthi izifundo CO2, 'ukufudumala komhlaba' kanye 'nokwehliswa kwesibalo sabantu' zivela emndenini ofanayo.
U-Greta Thunberg (owazalwa e-2003) ngokusho kweWikipedia umzala wesibili okude weSenee August Arrhenius. Ubaba wakhe uSvante Thunberg, ongumlingisi, uqanjwe ngoSenee Arrhenius. I-Arrhenius ibonwa njengososayensi wokuqala ukuchaza lo mphumela okuthiwa yi-Arrhenius, ukuthuthukiswa okungokwemvelo kokushisa komhlaba ngokwanda kokuhwamuka kwamanzi kanye ne-carbon dioxide (CO2) kusuka olwandle ngenxa yokwehla kwezinga lokuqonda. Ubikezele ukuthi ukwenyuka kwe-CO2 emkhathini kubangela ukwanda kwezinga lokushisa eMhlabeni. Ngokusho kwakhe, ukuphindaphindwe kabili kwe-CO2 kuzoxhunyaniswa nokushisa kusuka ku-4 kuya kuma-6 degrees, okubangelwa ukushisa kwelanga kwengxenye ye-2 / 3e kanye ne-CO1 yengxenye ye-3 / 2e. Lokhu kuchazwe ngabaphenyi abanjengoKeel njengomthelela wokugcina ukushisa obangelwa i-CO2 ngokuphelele. Ngakho-ke ungasho ukuthi le ndaba ingumndeni.
USenee Arrhenius wazalelwa eGut Vik, eduze nase-Uppsala, indodana kaSvante Gustav noCarolina Thunberg Arrhenius. Kubukeka sengathi uGreta akayona umzala okude, kepha ungumzukulu oqondile. I-Wikipedia ayisho ukuthi uSvante Arrhenius ngokwakhe futhi ushade noThunberg. Igama lakhe kwakunguKarolina Kristina Thunberg. Lokhu kubonakala emiphumeleni yokusesha ebonakalayo evela ku-Google. Kodwa-ke, uma uchofoza kusixhumanisi uqobo, okuqukethwe kuyafana myheritage.com ukuze ilungiswe maqondana nalokho okusetshenziswa ngumphumela wokusesha (bheka isithombe esingezansi). Kubukeka sengathi kunokuxabana okumbalwa kanye nama-pedigrees futhi kubonakala sengathi igama elithi Thunberg empeleni lingaxhunyaniswa ngokuqondile nalo msunguli wokushisa komhlaba, iSenee Arrhenius. Kuyamangaza futhi ukuthi kungenzeka ukuthi uSvante ushade emndenini (ovela eceleni kukanina). Isithandwa esinjalo kwesinye isikhathi yinto esiyibonayo ngama-bloodlines amadala amahle (njengaphakathi ku incwadi yami ebizwa). Kodwa-ke, uma kukhona ukungcungcutheka ngezihlahla zomndeni, khona-ke lo mbhalo oqondile kungenzeka ungaqinisekiswa, kepha ukuxhumana komndeni akunakuphikwa.
USenee Arrhenius wabandakanyeka kuma-eugenics futhi wayeyilungu lebhodi leSweden Society for Racial Hygiene. Iwebhusayithi eugenicsarchive.ca ithi okulandelayo ngalokhu:
U-Arrhenius wazibandakanya enhlanganweni yama-eugenics ngokujoyina iSweden Society for Racial Hygiene, iqembu eligxile ekucwaningeni nasekuthuthukiseni izinzuzo zokukhiqizwa kabusha okulawulwa kubantu (Broberg & Roll-Hansen, 2005). Lo mphakathi wasungulwa ku-1909 emzameni wokudidiyela ama-eugenics futhi wagqugquzela ushintsho lwenqubomgomo ukukhuthaza ama-eugenics (Bjorkman & Widmalm, 2010). U-Arrhenius wayengeyena ilungu kuphela; ubesebhodini lomphakathi (Broberg & Roll-Hansen, 2005). Umphakathi wanikeza izinkulumo futhi wanikeza umphakathi amapheshana e-pro-eugenic, kodwa ngenxa yokuthi kwakungekho emthethweni ngabo ukuthi baxoxe nganoma iyiphi indlela yokulawula ukuzalwa, iqembu lalicatshangelwa ukuthi lalinethonya elilinganiselwe (i-Broberg & Roll-Hansen, i-2005).
U-Arrhenius wabandakanyeka enhlanganweni yama-eugenics ngokuba yilungu leSweden Society for Purity, iqembu eligxile ekucwaningeni nasekuthuthukiseni izinzuzo zokukhiqizwa komuntu okulawulwa (Broberg & Roll-Hansen, 2005). Le nhlangano yasungulwa ku-1909 ngomzamo wokwazisa ama-eugenics futhi ikhuthaze ukuguqulwa kwenqubomgomo ukukhuthaza ama-eugenics (Bjorkman & Widmalm, 2010). U-Arrhenius wayengeyena ilungu kuphela; ubesemabhodini kasoseshini (Broberg & Roll-Hansen, 2005). Le nhlangano yanikeza izinkulumo futhi yasabalalisa amapheshana e-pro-eugenic emphakathini, kodwa ngoba kwakungekho emthethweni ukuxoxa nganoma iyiphi indlela yokuvimbela inzalo, kwakucatshangwa ukuthi iqembu ngokuvamile lalinethonya elilinganiselwe (Broberg & Roll-Hansen, 2005).
Ngakho-ke umkhulu kaGreta (ocatshangelwa ukuthi ungumkhulu) wayephezulu kakhulu. Cishe i-1900, le Sentie Arrhenius yabamba iqhaza ekusungulweni kweNobel Institute kanye neMiklomelo kaNobel ehambisana nayo. Ku-1901 ubekhona - naphezu kokuphikiswa okunamandla - wakhetha ilungu leRoyal Sweden Academy of Sciences. Kuyo yonke impilo yakhe wayezohlala eyilungu leKomidi leNobel lePhysics kanye nelungu lekomidi leNobel of Chemistry. Usebenzise isikhundla sakhe esinethonya ukuhlela imiklomelo kaNobel yabangane bakhe (uJacobus van 't Hoff, uWilhelm Ostwald noTheodore Richards) futhi wazama ukubakhumbula ezitheni zakhe (uPaul Ehrlich, uWalther Nernst, uDmitri Mendeleev). Ubuye wathola uMklomelo kaNobel kwi1903 ngakho-ke eqinisweni waziphilisa, ngoba wayebandakanyeka ekumiseni isikhungo esizothola imiklomelo. Ngakho-ke isayensi ngaleso sikhathi imayelana nokukhetha hhayi mayelana nokuqukethwe.
Kuyajabulisa ukuthi ezincwadini eziningi kuxoxwa ukuthi indaba yokufudumala komhlaba imayelana nokusungula uhulumeni womhlaba kanye nokwehliswa kwesibalo sabantu. Ngibhale ngalokho embhalweni wami wokugcina (niyabo lapha). Ngaphakathi lesi sihloko Umshicileli uBrandon Smith ubuye akwenze kucace ukuthi i-manifesto evela kuNobhala Jikelele we-UN evela kwi-90 ikhombisa ukuthi ukufudumala komhlaba kwaqalwa ukwesabisa ukwesabisa inani labantu emhlabeni bese kuqhutshwa nge-ajenda. Esihlokweni sakhe ukhombisa ngokusobala ukuthi leyo-ajenda nayo ithinta ukuncishiswa kwabantu. Leyo nto ye-ajenda nayo ingahle itholakale kumkhulu ka-Greta (ocatshangelwe).
Ngakho-ke uma uGreta Thunberg eshaya ephakeme kakhulu evela embhoshongweni kangangokuba kudingeka silalele kakhulu isayensi yokushisa komhlaba nge-CO2, manje kuvela ukuthi umbono uthi uvela ngqo kuye (kungenzeka kakhulu) omkhulu-omkhulu nokuthi umkhulu omkhulu ofanayo scammer owazinikelayo yena nabangane bakhe Imiklomelo kaNobel. Lokho kushiwo ngendlela ososayensi abaningi namuhla abadonswa ngayo eceleni lapho begxeka ukufundwa okusemthethweni kokushisa komhlaba ngenxa ye-CO2.
Encwadini yami entsha uzothola isifinyezo esicacile sazo zonke izingqimba zokukhohlisa nokukhohlisa. Ibuye ikhombise ukuthi lolo hlelo olusha lomhlaba luzofinyelela kanjani emazingeni e-DNA nangokuxhumeka kobuchopho bekhompyutha. Incwadi akuyona ikhophi yezincwadi zikaDavid Icke futhi ayihlangene neziphathamandla zomhlaba noma ezihuquzelayo. Incwadi, nokho, inikezela ngesifinyezo esibalulekile sendlela izendlalelo zohlelo zihlelwe kanjani nokuthi zingaqondwa kanjani. Ngoba le ncwadi ingafundwa ngosuku olulodwa futhi iza nesisombululo sikakhonkolo, kulula kakhulu ukusabalalisa emndenini nakubangane. Isikhathi sokuthatha isenzo ngakho-ke isikhathi sesikukhuthaza incwadi. Uphinde uxhase umsebenzi wami ngokuthengwa kwencwadi.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: myheritage.com, alt-market.com, eugenicsarchive.ca
Amathegi: isizukulwane, wehla, Umphumela we-Arrhenius, CO2, ama-eugenics, afakiwe, ngoba, Greta, inhlanzeko, Okwehlanga, Umphakathi, okuhamba phambili, Senee Arrhenius, Swedish, Thunberg
18 November 2019 ku-13: 42
Konke kungobukhomanisi ngomnyango wangemuva, lapho inqwaba noma okusele kuyo kushiya amandla / amandla kwabambalwa abajabulayo ngaphansi kokushintshwa 'kokushintsha kwesimo sezulu'.
“Akuwona ukuphela kwethemba lomhlaba ophuculwe izimpucuko zezimboni? Akuwona yini umthwalo wethu ukwenza lokho? ”- UMaurice Strong, umsunguli we-UN Environment Programme
"I-"izationization" evelayo noma impucuko yethu ... izoba nemiphumela emibi yezepolitiki. Mhlawumbe okubaluleke kunakho konke kuzoba ushintsho oluhamba kancane esimweni seNhlangano Yezizwe. Nakanjani, kumele icabange ezinye zezindlela zohulumeni wezwe. ”- UMikhail Gorbachev, State of the World Forum
Ngemuva 'kokuwa' kobusoshiyali baseSoviet uGorbachev waphothula iziqu ezithile ezikhundleni zamandla ngaphezu kohulumeni abazimele. Ngesikhathi sokuphathwa kukaClinton wayehlala e-Presidio eSan Francisco *, emane nje endiza isiphambano esiluhlaza se Knight of Malta lapho ahlala khona. Indima yakhe ne-UN ibilokhu ikhuthaza inkolo entsha ye- “Green” ye-NWO evunyelwe yi-UN ngenqwaba. Kanye nabalingiswa abanjengoMaurice Strong no-Al Gore, uGorbachev wabhala "I-Earth Charter" okuhloswe ngayo ukufaka esikhundleni iMiyalo Eyishumi.
18 November 2019 ku-14: 46
18 November 2019 ku-14: 47
U-Adam Weisshaupt naye ungumndeni noma kuyizindaba ezingezona lezo?
18 November 2019 ku-14: 50
IThunberg ngumndeni owaziwa ngokuthi yi-freemason. Idlozi likanina laliyisazi sefilosofi yemvelo (unjiniyela wezenhlalo) oxhumene nomsunguli wokukhanya waseBavaria u-Adamu Weisshaupt.
Le ndlela le sayithi ibika ngayo. Ngizoyithumela isikhashana, kodwa ngeqiniso ayisoze yalandelwa. Kunoma ikuphi, igama livela encwadini efanayo, kodwa noma ngabe lokho kusho ukuthi konke kusenokude.
18 November 2019 ku-15: 00
Yebo Gotha nendawo ezungezile kuyindawo ethokozisayo yomndeni othile .. ISaxe-Coburg neGotha (isivunguvungu somoya), ukuze ukwazi ukubona ukuthi imigqa isebenza kanjani futhi ..
IMalizia II izokhunjulwa ngabakwa-yachtsman abadumile uBoris Herrmann noPierre Casiraghi, umzukulu noma owedlule kaPrince Ranier III nomlingisi uGrace Kelly. Lesi sikejana, sasike saqanjwa ngokuthi i-Edmond de Rothschild, ngemuva kwesikweletu sezezimali kanye nomsunguli wemikhumbi yokugijima. Ukwakhiwa kwaso kubiza ngaphezulu noma ku- $ 4 million.
kahle abasolwa abajwayelekile, awukwazi ukukubalekela ...
18 November 2019 ku-15: 08
ngakho-ke lalelisisa ikakhulukazi lo mkhakha waseGotha, ukuthi onsomi ihluke kanjani kahle ngemuva nesizinda 😀 Imvula eyi-Purple noma ingabe iNgobunxele noma kunjalo 😉
18 November 2019 ku-15: 25
futhi ubone ukuthi i-athikili ivela kanjani kusayithi le-trollensite ngasikhathi sinye, ukudonsela yonke into emuva kuhlekisi futhi ilawula ukusesha:
Ingabe uGreta Thunberg ungumhambi wesikhathi?
NgoMsombuluko, Novemba 18 2019 15: 04
18 November 2019 ku-18: 44
Ungasho ngenombolo yezikhathi ukuthi i-athikili efana naleya yabiwa kanye nenani lezivakashi ukuthi elokugcina alikhuphuki kakhulu ngokwesilinganiso, okuyisibonakaliso sokuthi i-Facebook imane nje uyihlanze (ingakhombisi kumugqa wesikhathi wabangane). Ngakho-ke imbozwe nje futhi akekho ongayibona. Inkululeko yokukhuluma, kepha bese igoqiwe.
« I-UN manifesto '90 iyabonisa: izindlela zesimo sezulu ezakhelwe ukusebenzisa uhulumeni wezwe
UNicky Verstappen uJos Brech umayelana nokwamukela imininingo egciniwe ye-DNA yokuthola i-DNA yakho online »
Ukuvakashelwa okuphelele: 14.608.015